पर्यटक हुम्क-टेंटले गर्दा पर्यटकको उपकरणको दुर्लभ नमूनालाई घर फर्किन्छ। यद्यपि, यसको सुविधा र बहुभाषी अयोग्य छ।
दाँत फाँटेर तम्बूको प्रयोगको क्षेत्र
एक पनरोक क्यान्सर र एक मच्छर नेट संग लटका झुकाव को रूप मा यसको उपयोग अपरिहार्य इलाका र पर्वत ढलान मा विशेष रूप देखि महत्वपूर्ण छ जब एक पारंपरिक तम्बू को लागि एक उपयुक्त क्षेत्र को खोज गर्न को लागी संभव छैन।
एक ह्याकक एक हिड्ने वा बाइक यात्रामा अयोग्य उपकरण हुन सक्छ, साथै गर्मीको समयमा देशमा एक आरामदायक सुत्न ठाउँ। खासगरी कम्पैक्टनेस र बहुमुखीताका प्रशंसकहरूको विचारको मूल्यांकन गर्नुहोस्। यी र अन्य महत्त्वपूर्ण गुणहरू यस तम्बूहरूमा पूर्ण छन्।
ह्याकक-टेंटको स्थापना र समाप्ति
यस्तो ढोका तम्बू स्थापना गर्न, तपाइँलाई पनि एक क्षेत्र खाली गर्न आवश्यक छैन। 15-20 वटा पेटी व्यास व्यास को साथ 15-20 सेमी, वा कुनै अन्य बलियो समर्थन को खोज को लागि यो पर्याप्त छ। तिनीहरू 4-10 मिटर अलग हुनुपर्छ। स्थापना प्रक्रिया, क्षमताको उपलब्धता संग धेरै समय लाग्छ - केहि 2-3 मिनेट।
ह्याकक-टेंटमा जिपरको प्रवेश द्वारमा मच्छर नेट समावेश गर्दछ, व्यक्तिगत वस्तुहरूका लागि जेबहरू, सुरक्षात्मक पङ्क्तिहरू, एक प्याकिंग स्टोजिङ, लोचदार ब्रेसिजको सेट, विभिन्न प्रकारका टेंटहरू।
यसको अतिरिक्त, तपाईं तहका इन्सुलेशन र पवन संरक्षणको लागि तह तहहरू खरीद गर्न सक्नुहुन्छ - तथाकथित क्याप्सहरू र podstezhki। तम्बू भित्र एक पर्यटक गलीचा, फोम र अन्य गर्मी इन्सुलेटरको रूपमा हेटरको स्थानको लागि एक जेब छ। यस तैयारी संग, तपाईं व्यावहारिक रूप देखि लटका तम्बू को उपयोग गर्न सक्छन् सारा सिजन, सडकले सकारात्मक तापमान धारण गरिरहेको छ।
आज तपाईं घरको उत्पादनका उत्पादनहरू पाउन सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, एक ह्याक-टेंट विद्रोह गियरहरू। 2011 देखि उनीहरूले रूसमा उत्पादन गरिसकेका छन्, पहिलो र सर्वोत्तम हजुर-टेंटका लागि एनालॉगहरू - अमेरिकन क्लार्क ह्याक "ठाडो" वा बेलायती ट्री टेंट डिजाइन टीम।
रूसी टेन्टले गम्भीर परीक्षणहरूको लागि तयार छ, यसले तपाईंलाई वर्षा, हावा, सूरज, कीराहरूबाट जोगाउनेछ। यसको साइजले रातको लागि बस्न सजिलो बनाउनेछ। तम्बू फ्लोरको एनाटोटिक आकारले ब्याक, पेट वा साइडमा आरामदायक व्यवस्था प्रदान गर्दछ। एकै समयमा तम्बले अलि कम हुन्छ - आकार र कन्फिगरेसनमा निर्भर गरि 1.2 देखि 1.9किलोग्राम सम्म।
न्यू यर्क सहरमा महानगर संग्रहालय कला को कला
अब्खाजा कसरी प्राप्त गर्ने?
युरोपमा स्की रिसोर्ट्स
समुद्रमा बाकूमा बस्नुहोस्
Santorini मा होटल
अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो ज्वालामुखी
उत्तरी गोवा को समुद्र तटहरु
सेन्ट पीटर्सबर्गको उपनगर
कजानमा कुल शरीफ मस्जिद
स्टाइलिश महिला आभूषण
जस्ता सिंक - अनुप्रयोग
बच्चा किन पेट हिचकीमा हुन्छ?
ट्रिचोनोमनस कोलोपिसिस - द्रुत उपचारको लागि लागूपदार्थ र जडी बूटी
खेल शैली कपडा
जोगर्सहरुको लागि जीन्स
कार्लोवी वेकरी नमक
पूर्व-पतिको सपना के हो?
अम्बैगेल गर्भावस्थाको समयमा
अर्जेन्टिना कहां छ?
Gainers - हानि
रतुरीम - एक सनकी परिदृश्य डिजाइन